Ama-turrets amakhulu ekwindla nasebusika e-tinker | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izibani zasebusika ezenziwe ngokwezifiso ezinezintambo zokunamathisela
Izibani zomoya ezivela ezinkulungwaneni eziyizinkulungwane nanye
Izibani ezenziwe ekhaya babe ne-charm yabo ekhethekile. Ehlobo bazama ukugubha emgodini omakhelwane abashisayo, ekwindla nasebusika futhi bahlobisa indlu yethu noma idili, ngisho noma kungekho moya.
Iziphepho ekwindla njengomhlobiso
Yebo, bheka izibani ezenziwe ekhaya ekwindla nasebusika njengomhlobiso ngaphandle komnyango, isibonelo, emnyango, omkhulu. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi kulula, eyodwa Ukwakha i-windlight ngokwakhongakho-ke ngisho nezingane zingakujabulela futhi zifinyelele umphumela omuhle ngaphandle kolwazi olwandulele. Uma lokho kungekhona isisusa ...
U-Windlichter uvele uzicabange
Izibani ezenziwe ekhaya ezenzelwe ukuwa
Ngenye home-made ekwindla ukukhanya umoya Uma unekhanda elifanele lekhandlela. Uma ilanga elikhulu, ungasebenzisa ukulondoloza izimbiza. Yiqiniso, zitholakala ngobukhulu obuhlukahlukene. Ngisho ne-jam jar ingasebenza kahle.
Kubukeka buhle njalo uma ungewona owodwa ilanga elenziwe ekhaya esetshenziselwa umhlobiso, kodwa okungenani izinhlobo ezintathu ezifanayo etafuleni noma kwi-sill window.
Njengoba amakhandlela ayigugu noma - ngokuya ngobukhulu beglasi - ngisho namakhandlela ensika emincane.
Kububuko ekwindla udinga amaqabunga amabalabala we-maple & co. Lezi kufanele zomiswe ezinsukwini ezimbalwa ngaphambili. Khona-ke ungawabopha ngentambo elula yokuhlobisa ingilazi. Kodwa qaphela: Sicela uqiniseke ukuthi amaqabunga owomile akakwazi ukuxhumana nomlilo wekhandlela.
Ngalendlela ungakwazi futhi ukuqhubela phambili zonke izikhathi esibukweni. Izinkanyezi zamakhadibhodi amatshe ebusika, amaqabunga omisiwe namagilebhisi entwasahlobo nasehlobo. Into enhle ukuthi ukuthi a ilanga elenziwe ekhaya cishe izindleko zemali!
Yebo nawe udinga amakhandlela neglasi kulokhu. Ngaphezu kwalokho, udinga iphepha lokunamathisela iphepha nokulandelela iphepha. Kulungile ku-tapetenkleistermethode ubukeka ngisho nengilazi encane, oye wafaka emaceleni amancane, isibonelo, esiteyini sikaKhisimusi.
Kusukela ephepheni lokulandelela le tealight eyenziwe ngokwabo Izinhlobo zebusika ezifana nezimbali eziqhwaqhakazile, izinkanyezi noma izihlahla ze-fir. Lezi zihlanganiswe eceleni noma zihlanganisa (nice, uma uchitha izinkanyezi kuphela noma nje ama-frosts, isibonelo) ene-wallpaper enamathisela egilazini.
Ngisho nezingane ezincane kakhulu zingamane ziqede iziqephu noma izingcezu ephepheni. Mhlawumbe usethe umbala ohambisana noKhisimusi. Futhi uma kufanele ibe nemibala, kungukukhanya kwe-all-season ukukhanya!
Uma ungafuni ukwenza i-lantern yakho ingaphandle kweglasi, ungasebenza futhi ngephepha lesikhumba. Nokho, lokho kunzima kakhulu ngezingane ezincane kakhulu. Lapha udinga ukubheja ubhiya, iziqeshana zamaphepha ezinombala, iphepha lesikhumba kanye namatshe akhazimulayo. Kanti futhi, izikhali, i-glue kanye ne-tealights.
Ukubhaka ekwindla - ama-apula abhakiwe nama-muffin amathanga
Ukwindla kwekhasi lokubala
Imidwebo yamakhasi ezinkathi zonyaka ekwindla
Ikhasi lokubala lokubusika
Ikhasi lokubala lombala we-snowball
Ikhasi lokubala lomnyaka webusika